Top Transfer 5 File u Android Waa in aan ogaado
Top 5 File Android Transfer Software
Android waa madal telefoonka gacanta ugu lagaga dhawaaqi ee suuqa la share 74,5% suuqa sida diiwaan 2013. feature ugu muhiimsan waxa ka mid ah waa fudayd ee suuqa kala iibsiga file. Kala iibsiga File iyo ka Android lagu gaadhi karo Softwares kala duwan oo laga heli karo suuqa. Ka dib waxaa ku Softwares kala iibsiga file Android oo loo qiimeeyo ee sare. Inta aanad ah software kala iibsiga file Android, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad eegno this guide buuxa si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya telefoonada wax fudud oo si ammaan ah.
1. Wondershare MobileGo - Comprehensive Android Files Transfer Software
Wondershare MobileGo waa lagu kalsoonaan karo Android software kala iibsiga file. Waxay awood u aad si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, videos, xiriirada, music, sawiro, Excel, DOC, PPT, PDF oo dheeraad ah oo ka computer si ay telefoonka ama kiniin Android, iyo habka kale ee ku xeeran. Marka aad hesho telefoonka Android cusub ama kiniin ah, waxaad si fudud u wareejin karaan faylasha ka qalab jir Android inay telefoonka cusub.
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay si / ka Android Qalabka la Transfer File Android ee Best
Tallaabada 1. Run qalab kala iibsiga file u Android ah
Orod qalab kala iibsiga file Android on your computer. Ka dib markaas, xirmaan telefoonka aad Android la kombiyuutarka via fiilooyinka USB siday u kala horreeyaan. Ayaa qalab kala iibsiga file ogaan doonaa qalabka Android aad si toos ah. Haddii aan samayn, waa in aad barataa sida loo xiro qalabka aad si sax ah .
Tallaabada 2. Dooro nooc file si ay u gudbiyaan
In uu furmo suuqa ugu weyn, noocyada file oo dhan lagu taageeray si ay u gudbiyaan waxay ku qoran yihiin qaybta soo tagay. Guji mid ka mid ah si ay daaha ka furmo suuqa maamulka. Oo halkaasaannu ka, awoodo aad files kala iibsiga sidoo kale ka qalab Android inay computer ama dejinteeda files in qalab Android ka kombiyuutarka.
Tallaabada 3. Transfer files u dhexeeya 2 qalabka
Muuqaal kale oo la yaab leh, waayo, taasu Android qalab kala iibsiga file waa in uu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan SMS, photos, music, videos, xiriirada iyo ka badan oo u dhexeeya laba qalabka, kuwaas oo, Android inay Android, Android inay macruufka, macruufka in Android, Symbian in Android, iwm . Si aad u isticmaasho habkaani, waa in aad riix "Super Qalabka" dusheeda uu furmo suuqa iyo dooran "Transfer Phone"> "Phone in Transfer Phone". Ka dib markaas, isku xiro labada qalabka iyo wareejiyo files u dhexeeya labada qalabka
Mobisynapse waa codsi kala iibsiga file a free Android oo loo isticmaalo si ay u gudbiyaan oo la maareeyo videos, photos, music, xiriirada iyo SMS ka qalab Android si aad u PC. Xidhiidhka ka dhexeeya telefoonka iyo PC la aasaasay iyada oo USB ah caadiga ah ama iyada oo la xidhiidha Wi-Fi karo. The "Files" icon ku bar menu ee Mobisynapse furmo shaashadda file kala iibsiga ka dhigaya files wareejinta sida hawl fudud.
Bedelka laga daadiyo, sawiro, videos iyo music kombiyuutar si ay u qalab Android, iyo habka kale ee ku xeeran.
Nidaameed Muuqaalka leh qalabka Android xiriirada, jadwalka taariikhda, hawlaha, qoraalada iyo xusuusinta.
Playlists Import ka Lugood in aad telefoon ama Android kiniin.
MOBILedit waa barnaamij kala iibsiga la yaab leh file Android oo caawiya dadka isticmaala si ay u gudbiyaan liiska oo dhan oo ay ku jiraan xiriir taleefan lambarrada, sawiro, cinwaanada, emails iyo qoraalada ka dhowaad telefoon kasta oo si telefoon kasta oo cusub si fudud oo si deg deg ah. Intaa waxaa dheer, in aad si fudud u soo jiidi kartaa & hoos u sawiro, dokumentiyo, music, iyo videos ka / si aad u computer ama telefoon cusub.
Bedelka liiska xiriir oo dhan u dhexeeya qalabka telefoonka.
Dhaqaaq dokumentiyada, sawirada, music, videos, iyo wixii la mid ah inta u dhaxaysa telefoonka iyo PC.
Samsung Kies waxaa loo isticmaalaa in lagu wareejiyo photos, music, podcasts iyo filimaan ka qalab Samsung in Kies in kombiyuutarka, iyo qeybsanaan. Marka aad iska ilaawaan hore Apple, Nokia iyo Blackberry ee telefoonada Samsung, aad wareejin karaan xiriirada, music, sawiro iyo ka dhex file ah oo gurmad ah.
Copy file vCard ka kombiyuutarka si aad telefoonada Samsung.
Bedelka files ka Apple, Nokia ama Blackberry in aad telefoon Samsung via file ah ee kaabta jira.
Bedelka music, sawiro, videos iyo podcasts ka computer qalab Samsung.
Wondershare MobileTrans , qalab weyn oo loogu iibsiga file u Android, waa xalka ugu habboon in dabooli kara baahiyaha kala iibsiga kala duwan. Waa doorashada ugu fiican ee loogu talagalay wareejinta faylasha u dhexeeya Nokia (Symbian) telefoonka, qalab Apple iyo qalab Android la click hal. Sidaa daraadeed, ugu badnaan kartaa in aad xiriir kala iibsiga, SMS, abuse wac, barnaamijyadooda iyo waxyaabaha multimedia.
Bedelka music, videos, xiriirada, SMS iyo sawiro dhexeeya iDevice iyo qalab Android.
Copy xiriir la buuxda info, sida horyaalka shaqo, magaca shirkadda, cinwaanka email, ka telefoonka ah Android inay phone Nokia socda Symbian.
Bedelka dhammaan faylasha, dhihi xiriirada, barnaamijyadooda, abuse wac, music, videos, sawiro iyo SMS u dhexeeya laba qalabka Android.
Kala iibsiga file Easy dhexeeya telefoonada Android, iyadoo aan loo eegayn waxa shabakadaha ay yihiin.
Articles More ah ee Android aad jeceshahay inaad
5 Waa Dos la New Android Phone
Talooyin in ay dardar Your Device Android
CSV Import Xiriirada in Device Android
Sida loo masixi Xogta gaarka ah ee Android Devices
Hagaajin jilicsan Bricked on Android
Top 8 Root Tools Android aad u baahan tahay
> Resource > Android > Top 5 Software File Transfer Android Waa in aan ogaado